Tatitra ny asa vita taona 2018 nataon’ny vaomieram-pirenena misahana ny zon’olombelona (CNIDH). – Sénat de Madagascar
November 21, 2019 RAMBELO Abel NIRINA
Araka ny voalaza ao amin’ny lalàna laharana faha 2014-007 tamin’ny 22 jolay 2014 mikasika ny Vaomieram-pirenena misahana ny zon’olombelona (CNIDH) dia indray mandeha isan-taona izy ireo dia tokony manao tatitra ny asa vita eny anivon’ny Antenimiera roa tonta. Notanterahina anio alarobia 20 Novambra 2019 izany ho an’ny Antenimierandoholona.
Nandritra io fotoana io no nitanisan-dRtoa Mireille RABENORO Filohan’ny CNIDH ireo asa nisongadina vitan’izy ireo tamin’ny taona 2018. Anisan’izany ny ny fitsidihana ireo fonja misy eto Madagasikara afa-tsy ny fonjan’i Maintirano ; ny famoahana fampitam-baovao ho fampahafantarana ny zava-misy momba ny fanitsakitsahana ny zon’olombelona ary fanairana ny fitondrana mpanatanteraka amin’ny toe-javatra misy ; ny fanaovana ny fanadihadiana ifotony sy fanaovana tatitra amin’ny tompon’andraikitra voakasik’izany.
Ny CNIDH dia afaka miditra an-tsehatra sy manao tolo-kevitra mahakasika ny fepetra ilaina hampitsaharana ny fanitsakitsahana ny zon’olombelona. Maro noho izany ireo fitarainana azon’izy ireo avy amin’ny vahoaka malagasy hoy ihany izy amin’ity sehatra tsy fanajana ny zon’olombelona ity. Nisongadina nandritra ny fanadihadiana izay nataon’izy ireo ny tranga tany Ambohimahasoa izay nahitana famonoana olona miisa 11 novonoina tsy misy fitsarana, teo ihany koa ny tranga izay nisy tao Vohilava distrikan’i Mananjary, mpitrandraka volamena izay nogadraina tsy amin’antony.
Nambaran’ireo Loholona nanatrika fa ilaina ny fihaonana tahaka izao satria manampy azy ireo amin’ny fanatanterahana ny asany dia ny fanaraha-maso ny asan’ny Governemanta izany. Nandritra io fotoana io ihany koa dia samy nilaza ireo fanitsakitsahana zon’olombelona izay tsikaritra amin’ireo faritra misy azy avy ireo Loholona.
Tsara homarihina moa fa ny CNIDH dia miandraikitra ny fampandrosoana sy fiarovana ny zon’olombelona rehetra tsy ankanavaka. Nangataka tamin’ny Loholon’i Madagasikara moa izy ireo ny mba hiaraka hanatanteraka fidinana ifotony. Izany no atao dia ny hanamora kokoa ny hafatra tiana hampitaina noho ny maha mpiahy ny Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny Antenimierandoholona.
Marihina moa fa ny Filoha lefitrin’ny Antenimierandoholona KOLO Roger no nitarika ny fotoana izay notronin’ireo mpikambana ao amin’ny Birao maharitra.
« Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle: Le Sénat de Madagascar à l’honneur au forum sous Régional des Parlementaires.
« Forum sous Régional des Parlementaires »: Madagasikara no Firenena nametraka ny Vondrona Parlementera ho amin’ny fiarovana ara-tsakafo sy ny fanjarian-tsakafo voalohany teto Afrika. »